Fifidianana · Mey, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Fifidianana · Mey, 2012
Tantara mikasika ny Fifidianana tamin'ny Mey, 2012
Afrika Mainty 29 Mey 2012
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 29 Mey 2012
Aostralia: Fitarainana Hafahafa Avy Amin'ny Mpitrandraka Harena An-kibon'ny Tany Momba Ny Tsikombakomban'ny CIA – Resaka Arintany
Oseania 27 Mey 2012
Tamin'ny fomba "hafahafa" mitroatroatra no nahatafiditra an'i Clive Palmer, mpitrandraka harena an-kibon'ny tany, ho ao anatin'ny laharan'ireo mpisaina ny firaisana tsikombakomban'ny CIA tamin'ity herinandro ity nandritry ny fampielezan-kevitra ho amin'ny fifidianana tao amin'ny fanjakan'i Queensland. Nifaly aok'izany ireo bilaogera Aostraliana tamin'ny fiampangàny ny famatsian'ny CIA vola ny kandidàn'ny Green sy ny fikambanana toy ny Greenpeace.
Ejipta: Fahadisoam-panantenana tamin'ny adihevitra voalohany nifanaovan'ireo kandidà filoham-pirenena
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 20 Mey 2012
Tamin'ny 10 may 2012, nifantoka nanoloana ny fahitalavitra ny Ejiptiana nanaraka ny adi-hevitra voalohany nifanaovan'ireo mpilatsaka hofidiana filoham-pirenena anankiroa matanjaka indrindra , Amr Moussa sy Abdel Moneim Aboul Fotouh. Na izany aza anefa, tsy io akory no adihevitra voalohany tany amin'ny tany Arabo, fa efa nisy ohatra tany Maoritania tamin'ny 2007 nifanaovan'i...
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 17 Mey 2012
Eoropa Afovoany & Atsinanana 12 Mey 2012
Ny marainan'ny 9 Mey 2012, nisy olo-tsy fantatra nanafika tamin'ny alalan'ny DDoS (Distributed Denial of Service) ny vohikala mpikarakara mivantana Ustream.tv. Araka ny nolazain'i Victoria Levy avy ao amin'ny Ustream.tv, avy amin'ny IPs an'arivony, miorina any Rosia, Kazakhstan ary Iran ny fanafihana. Nitodika tany amin'ny mpisera iray manokana [ny fanafihana] izay tsy iza fa i, reggamortis1 [ru], ilay nampita ny fivorian'ny mpanohitra sy ny hetsi-panoherana ao Moskoa.
Azia Afovoany sy Kaokazy 10 Mey 2012